Muri pano: musha / Internet Marketing / 20 YouTube Tricks, Hacks, uye Zvimiro Zvauchada Kuziva Nezve Gore rino
Kana vanhu vachitaura nezvemazuva ano anonyanya kufarirwa ekugovana mawebhusaiti, YouTube inowanzo sara kunze kwekutaurirana ichifarira nzvimbo senge Facebook ne Twitter.
Asi usanyengerwe: YouTube ine zvakawanda zviri kuitirwa. Kunyangwe Facebook ingave iri yakakura saiti yekudyidzana, YouTube ine yechipiri kusvika mushure meFacebook maererano nekushandisa kwakawanda. Zvakare yechipiri huru yekutsvaga injini kuseri kwekambani yemubereki, Google.
Uye zviripo a ton yezvinhu zvinotonhorera zvaunogona kuita neYouTube izvo iwe zvausingazive nezvazvo, kunyangwe iwe uchishandisa YouTube kutarisa mavhidhiyo, kuatumira, kana zvese zviri zviviri. Semuenzaniso, waiziva here kuti YouTube ine chaiyo chaiyo chaiyo (VR) yekumisikidza kuona chero vhidhiyo mu360 degrees? Kana kuti iwe unogona kugadzira YouTube nguva chinongedzo chinounza vatariri kune yakatarwa nguva muvhidhiyo?
Pfungwa-ichivhuvhuta zvinhu, vanhu. Kuti ikubatsire iwe kuti unyatsobudirira kubva pachiri ichiri chakakurumbira chikuva, taisa pamwechete runyorwa rwe makumi maviri eanozivikanwa-asingazivikanwe hacks, matipi, uye maficha ayo YouTube inofanirwa kupa.
YouTube Tricks, Hacks, uye Zvimiro
Chinja chero vhidhiyo kuita GIF.
Gadzira YouTube nguva yekubatanidza kuti utange vhidhiyo pane dzimwe nzvimbo.
Ona yakanyorwa yakanyorwa yevhidhiyo.
Tsvaga mukutsvaga nekukodha yako yakanyorwa yakanyorwa.
Shandisa YouTube kunyora chinyorwa.
Gadzira, ugovana, uye shandira pamwe pane evhidhiyo playlists.
Sevha mavhidhiyo ekuona gare gare.
Gadzira yako wega YouTube URL.
Wedzera yekupedzisira skrini kana makadhi kusimudzira zvakafanana zvemukati.
Bhurawuza uye utore kubva paYouTube yemahara ruzha nemumhanzi raibhurari.
Wedzera zvekugadzira mhedzisiro neYouTube Enhancements.
Ridzai mavhidhiyo kumashure pane nharembozha.
Rarama live mavhidhiyo kuYouTube.
Isa uye utarise mavhidhiyo mune 360 ​​madigiri uye VR.
Tarisa uone itsva YouTube ads algorithm.
Bvisa ma ads kubva kuYouTube mavhidhiyo e $ 10 / mwedzi.
Shandisa Google Trends kuti uone mazwi akakurumbira ekutsvaga YouTube.
Vhura YouTube 'yakachengeteka' yevana vako.
Bvisa nhoroondo yako yekutarisa.
Dzidza nezve copyright dzeYouTube nenzira nyowani.
20 YouTube Tricks, Hacks, uye Zvimiro Zvauchada Kuziva Nezve
1. Unogona kushandura chero vhidhiyo yeYouTube kuita GIF uchishandisa iyo URL.
Wese munhu anoda maGIF, asi kuziva maitirwo azvo hazvizivikanwe ruzivo. Zvakanaka, zvinofanirwa kuve, nekuti zvese zvinotora idiki YouTube URL hunyengeri.
Kugadzira GIF kubva kune YouTube vhidhiyo: Sarudza vhidhiyo yekutarisa paYouTube uye tsvaga iyo URL kumusoro kwebrowser yako. Wedzera izwi "gif" pamberi chaipo pezita rezita saka raverenga kuti, "www.gifyoutube.com/ [your-video-tag]."
Izvi zvinokuunza iwe kune gifs.com, nevhidhiyo yako yatotakurwa uye yakagadzirira kugadzirisa. Pano, iwe unowana menyu yezvisarudzo kuruboshwe-kuruboshwe ine timeline bar padhuze nepasi pevhidhiyo yako. Iwe unogona kuseta iyo GIF nguva, kurima iyo furemu, wedzera zvinyorwa, uye zvimwe.
Dzvanya "Gadzira GIF" kumusoro-kurudyi uye zvinokuchidzira iwe nezveGIF zita uye seti yemaki. Wobva wadzvanya “Inotevera,” uye iwe une peji rinomhara rekutora kubva kwaunogovana yako GIF ichangobva kuumbwa. Ramba uchifunga kuti iwe unogona chete kurodha iyi GIF kune isingabvumirwe faira nekusaina ne gifs.com.
2. Unogona kugadzira chinongedzo chinotanga YouTube vhidhiyo pane imwe nguva.
Wakamboda kutumira mumwe munhu vhidhiyo yeYouTube, asi wovanongedzera kune imwe nguva? Ngatitii urikuedza kutsvaga shamwari dzako kuti dzidzidze kutamba muJustin Bieber's "Ruregerero" vhidhiyo yemumhanzi newe.
Panzvimbo pekutumira shamwari dzako chinongedzo cheYouTube nekuvarayiridza kuti vakurumidze kuenda ku0: 50 miniti mucherechedzo, unogona kuvatumira yakatarwa YouTube nguva chinongedzo chinotanga vhidhiyo chero nguva yaunosarudza. Dzvanya pano kuti uone zvandinoreva.
Zvakanaka, heino nzira yekuzviita nayo:
Kugadzira chinongedzo chinotanga YouTube vhidhiyo pane imwe nguva: Vhura vhidhiyo uye tinya "Goverana" kurudyi kurudyi rwemusoro wevhidhiyo. Zvino, muhwindo rezvisarudzo zvinowoneka, tarisa bhokisi riri padhuze ne "Tanga pa:" wobva wanyora munguva (mumaawa: maminitsi: masekondi) aunoda. Neimwe nzira, iwe unogona kumbomira vhidhiyo panguva yaunoda kuti itange uye iwo munda unozadza.
Mushure mechinguva chidiki, iwe uchaona tag inozviwedzera kusvika kumagumo eiyo generic YouTube chinongedzo (mune ino kesi, ? t = makumi mashanu). Ingo teedzera iyo linki uye unamate chero kwaunoda.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti haugone kupinza vhidhiyo saka inotanga pane imwe nguva; haugone kungobatanidza chete nazvo.
3. Unogona kuona nyore zvinyorwa zvakanyorwa zvemavhidhiyo evanhu.
Wanga uchiziva here kuti YouTube inogadzira yega yakanyorwa yega yega yega vhidhiyo yakaiswa pawebhusaiti yayo? Ndizvozvo - uye chero munhu anokwanisa kuwana izvo zvinyorwa kunze kwekunge mushandisi nemaoko anoiviga kubva kuvaoni.
Ini ndinogona kufunga dzinoverengeka dzakasiyana mamiriro apo mavhidhiyo zvinyorwa zvinogona kuuya zvinobatsira. Semuenzaniso, pamwe iwe unoda kunyora pasi chitaurwa kubva muvhidhiyo, asi iyo tedium yekumbomira-uye-kutaipa, kumbomira-uye-kutaipa ingakutyaire iwe kumadziro. Kana kuti pamwe iwe unofanirwa kutsvaga chaiyo chikamu chevhidhiyo, asi usade kudzokororazve chinhu chose kuti uiwane. Uine chinyorwa muruoko, unogona kuwana ruzivo rwakadai pasina kuzviita zvese neruoko.
Kuona chinyorwa chevhidhiyo: Vhura iyo vhidhiyo muYouTube uye tinya iyo "Zvimwe" tebhu pasi pezita revhidhiyo. Sarudza "Zvinyorwa" kubva pakaderera-pasi menyu.
(Kana usiri kuona iyi sarudzo, imhaka yekuti mushandisi akasarudza kuviga chinyorwa.)
Ichi chinyorwa chichaonekwa se module nyowani pahwindo rimwe chete. Muzviitiko zvakawanda, mushandisi akarodha vhidhiyo anenge asina kudzoka uye nekumonyorodza zvakanyorwa, saka hazvizove zvakakwana. Asi zvinonyatso kukuisira imwe nguva uye kurwadziwa.
4. Unogona kubatsira vhidhiyo yako kuti iwanikwe mukutsvaga nekugadzirisa kana kuisa yakanyorwa.
Vaviri YouTube nekambani yemubereki Google inotarisa akati wandei zvinhu kana uchiisa mavhidhiyo mukutsvaga kuona kuti vhidhiyo yako iri nezvei, uye chinyorwa chako ndechimwe chazvo. (Chinhu chakatokura chinzvimbo chinotsanangurwa nevhidhiyo yako, ndosaka Dhijitari Yekushambadzira Ryan Stewart anoratidza kuti unonyatso kunyora chinyorwa chako mubhokisi rerondedzero, zvakare.)
Kuwedzera chinyorwa kuvhidhiyo yako: Vhura vhidhiyo paYouTube, uye iwe uchaona mutsara wemifananidzo pazasi pebhatani rekutamba. Dzvanya icon kurudyi kurudyi kwe "Subtitles / CC." (CC inomirira "Closed Captions."
Gadza mutauro wako kana usati watove. Ipapo, iwe unobva wakurudzirwa kusarudza pakati penzira nhatu dzakasiyana dzekuwedzera zvinyorwa zvidiki kana zvinyorwa zvakavharwa muvhidhiyo yako…
Isa chinyorwa chakanyorwa-chisati chave kunyorwa kana yakatemwa nguva yemavara. (Dzidza zvakawanda nezvemhando dzemafaira aunogona kuisa uye nezvimwe pano.)
Namatira muchinyorwa chakazara chevhidhiyo, umo zvinyorwa zvemukati zvinyorwa zvichazomisikidzwa zvoga.
Nyora ivo mukati iwe uchiona vhidhiyo.
Ivo vanhu veYouTube vaita zvimwe zvinhu zvikuru kuita iyo yechitatu sarudzo (typing sezvaunoona) isingarwadze sezvinobvira. Semuenzaniso, kana iwe ukatarisa bhokisi padhuze ne "Mira vhidhiyo uchinyora," ichaita kuti maitiro ese akurumidze. Heino GIF inoratidza izvo muchiito:
Dzidza zvakawanda nezve kugadzirisa yako YouTube mavhidhiyo ekutsvaga mune iripazasi vhidhiyo.
5. Unogona kushandisa YouTube kuti uwane nyore zvinyorwa zvemahara zvemavhidhiyo ako uye maodhiyo faira.
Iyi ndiyo yekupedzisira nezve zvinyorwa, ini ndinovimbisa - asi ini ndichatengesa iwe hauna kumbofunga nezvavo nenzira iyi. Sezvauri kuziva kubva ku # 3, YouTube inongowedzera zvinyorwa kune yega vhidhiyo. Asi kana iwe uchitsvaga-kamwe-kudhindisa kweodhiyo kana vhidhiyo faira uye usingade kubhadhara sevhisi, yeYouTube yakavakirwa-mune magwaro ekunyora haisi nzvimbo yakaipa yekutanga. Unogona kugara uchizvichenesa gare gare.
Kuti uwane zvinyorwa zvinyorwa zvevhidhiyo: Simply tumira vhidhiyo yako kuYouTube, vhura pane webhusaiti yeYouTube, tinya iyo "Zvimwe" pasi pezita revhidhiyo, uye sarudza "Zvinyorwa" kubva pakudonhedza menyu. Zvinyorwa zvichaonekwa sedhiraivho nyowani pahwindo rimwe chete. Kana iwe uchida kuichenesa, tevera nhanho dzakatsanangurwa mu # 3 yeiyo mushandisi-inoshamwaridzika ruzivo.
Kuti uwane zvinyorwa zvinyorwa zvefaira rekuteerera: Iwe unozofanirwa kukodha odhiyo yako yekurekodha kuYouTube uchishandisa sevhisi senge TunesToTube. Zvinotora chero pakati pe2-30 maminetsi eYouTube kuiisa. Wobva watevera iwo mirairo yekutora otomatiki chinyorwa chevhidhiyo, yakatsanangurwa pamusoro.
6. Unogona kugadzira, kugovana, uye kubatana mumavhidhiyo playlists.
Sezvakangoita pane ako mamwe aunofarira ekugovana midhiya saiti seSpotify uye iTunes, unogona kugadzira "playlist" paYouTube - inova nzvimbo yekuchengetera nekuronga mavhidhiyo (ako nevamwe '). Iwe unogona kuchengeta zvinyorwa zvekutamba zvakavanzika, kuzviita paruzhinji, kana kutombozvigovana zvakananga nevamwe.
Zvinyorwa zvekutamba zvinobatsira kune akawanda akasiyana marudzi evashandisi, kubva kune mumwe munhu achiunganidza mavhidhiyo ekubika kune yavo iri kuuya yekudya kwemabiko kuenda kune iyo brand iri kugovera yavo YouTube vhidhiyo zvemukati nemusoro wenyaya. Semuyenzaniso, Tasty's YouTube playlists gura mabikirwo nerudzi rwekudya, zvichiita kuti zvive nyore kuti vanhu vatarise uye vawane zvavari kutsvaga:
Kugadzira playlist pane desktop: Enda kune peji rako rekutamba ne nekudzvanya pano kana kudzvanya icon reakaundi yako kumusoro kurudyi, kusarudza "Musiki Studio," nekudzvanya "Vhidhiyo Manager" kuruboshwe, uye kusarudza "Playlists." Wobva wadzvanya "Nyowani Playlist" kumusoro kurudyi uye sarudza kana iwe uchida kuzvichengeta zvakavanzika kana kuzviita zveruzhinji.
Kugadzira playlist pane nhare: Click pano yemirayiridzo inotsanangura maitiro ekugadzira zvinyorwa zvitsva uchishandisa yako iOS kana Android nhare mbozha.
Kuwedzera vhidhiyo kune playlist: Kana iwe uri kuwedzera vhidhiyo kune playlist iwe uchiri kuiona, tinya iyo "Wedzera kune" icon pazasi pevhidhiyo zita uye tarisa bhokisi riri padhuze neiyo playlist iyo iwe yaungade kuwedzera iyo.
Kana iwe uchida kuwedzera vhidhiyo kune playlist kubva ipapo peji rako rekutamba, chingobaya "Wedzera Vhidhiyo" uye unamate muvhidhiyo URL, sarudza vhidhiyo kubva kune ako uploads, kana kutsvaga vhidhiyo paYouTube. Paunenge iwe wawana vhidhiyo iwe yaunoda kuwedzera, sarudza iyo "Wedzera kune" menyu kubva kune iyo vhidhiyo uye wedzera iyo kune yekutamba.
Shamwari dzako dzinogona kupa kune ako runyorwa, zvakare. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuvhura kugona kwekubatana pane zvinyorwa zvekutamba. Paunenge uchinge wabatidza, chero munhu waunogovana naye playlist chinongedzo naye anogona kuwedzera mavhidhiyo kune iro playlist. (Vanogona zvakare kubvisa chero mavhidhiyo avakawedzera, zvakare.)
Kuwedzera shamwari kune playlist: Enda ku peji rako rekutamba zvakare uye vhura iyo playlist iwe yaunoda kubatana nayo. Dzvanya "Playlist Zvirongwa" uye sarudza iyo "Inoshanda" tag. Chinja pane iyo seti inobvumidza vanobatsirana kuwedzera mavhidhiyo ku playlist, uye kubva ipapo, unogona kuvatumira chinongedzo kwavanogona kuwedzera mavhidhiyo ku playlist.
Kana shamwari yako yangokokwa kuimba yekutamba, ivo vanozokwanisa kuwedzera mavhidhiyo matsva mairi uye kubvisa mavhidhiyo avakawedzera munguva yakapfuura. Ivo vanongofanira kutevedzera mimwe pa - screen rairo kutanga kuratidza kuti ivo vanoda kuve vanopa uye kusevha playlist kuaccount yavo.
Kana iwe ukawedzera vhidhiyo kune yekutamba yauri kushandira pairi, zita rako rinozooneka padhuze nevhidhiyo iri mune yekutamba, uye munhu wese anenge akokwa kuti ashandire pane iyo playlist achawana ziviso yekuti vhidhiyo nyowani yawedzerwa.
(Kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekuchengeta vanopa, rega kugamuchira mipiro kuchirongwa chekutamba, zvichingodaro, verenga iyi YouTube Rutsigiro peji.)
7. Unogona kusevha mavhidhiyo ekuona gare gare.
Wakamboona mavhidhiyo eYouTube iwe aunoshuvira kuti iwe ugone kuisa bookmark kune gare gare? Pamwe haugone kubatidza ruzha parizvino, kana pamwe hauna nguva yekuiona. Zvakanaka, YouTube yakatora peji kubva mu Facebook's… bhuku… nekuwedzera chimwe chinhu chakada kufanana ne Facebook "Sevha yeGare gare”Chinhu. PaYouTube, unogona kusevha mavhidhiyo ku "Tarisa Gare gare" playlist kuti uwane chero paunoda.
Rondedzero ye "Tarisa Gare gare" inoshanda seyakajairwa playlist, saka mirairo yacho yakafanana nedanho rapfuura (kunze kwekunge iwe usingakwanise kukoka vamwe kuti vabatsirane pane yako "Tarisa Gare gare" playlist).
Kuwedzera vhidhiyo kune yako "Tarisa Gare gare" playlist: Vhura vhidhiyo paYouTube uye tinya iyo "Wedzera ku" icon pazasi pezita revhidhiyo uye tarisa bhokisi riri padhuze neiyo playlist iwe yaungade kuwedzera kwairi, sezvawakaita mudanho rekutanga. Matanho acho akafanana zvakanyanya pane nhare, asi tinya pano kana iwe uchida iyo izere mirairo kubva kuYouTube Rutsigiro peji.
Kuti uwane iwo mavhidhiyo: Ingo enda kune rako rekutanga reYouTube uye sarudza "Tarisa Gare gare" kubva kumenyu kumusoro kwekuruboshwe-ruoko rwenyu.
Kubva ipapo, unogona kutarisa mavhidhiyo awanga uchichengetedza, pamwe nekubvisa zviri nyore mavhidhiyo kubva pane iwo runyorwa iwe awakatotarisa.
8. Unogona kugadzira yako yega YouTube URL.
Unoda kupa vanhu nyore kurangarira kero yewebhu kuti vasvike kune yako YouTube chiteshi? Iwe unogona chaizvo kugadzira yakasarudzika URL, iyo iwe yaunogona kutsamira pazvinhu senge zita rako rekuratidzira, rako YouTube zita rekushandisa, chero zvazvino zvisina maturo ma URL aunazvo, kana zita rewebhu rako rakabatana. HubSpot's, semuenzaniso, iri https://www.youtube.com/hubspot.
Hunokosha Note: Usati waita izvi, ita shuwa kuti une chokwadi iyi ndiyo tsika URL yaunoda - nekuti kana yabvumidzwa, haugone kukumbira kuti uchichinje, uyezve haugone kuchinjisa kune mumwe munhu. Ramba uchifunga kuti ichabatanidzwa kune ese maviri chiteshi chako cheYouTube uye chako kuzivikanwa kuGoogle +, zvakare.
Nehurombo, havazi vese vanokodzera tsika URL. Kuti uwane imwe, unofanirwa kuva nevanyori zana kana kupfuura, kuva nemazuva makumi matatu ekuberekwa, kuva nepikicha yakasimudzwa seyako koni icon, uye kurodha chiteshi art. Kana izvo zvichinzwika senge iwe, ramba uchiverenga.
Kuti utore yako URL yetsika: Vhura yako YouTube account marongero uye tinya "Yepamberi" mune rako zita chikamu.
Kana iwe uchikodzera kune yakasarudzika URL, iwe unozokurudzirwa kuti utaure yako neyako nekudzvanya chinongedzo.
Sarudza bhokisi riri padyo ne "ndinobvumirana neMitemo yeSevhisi." Zvino, kana uchinge wanyatso kuve nechokwadi kuti i URL yaunoda (sezvo iwe usingakwanise kuichinja), tinya "Chinja URL" kuti iite yekupedzisira.
9. Iwe unogona kuwedzera yekupedzisira skrini kana makadhi ekusimudzira zvemukati.
Muna 2008, YouTube yakatanga kubvumidza zvinonamira paYouTube zvinodaidzwa kuti "zvirevo" zvaunogona kuisa mumavhidhiyo ako. Aya madudziro akashanda semhando yekufona-ku-kuita mabhatani ekutungamira vanhu kuti vanyore kuchiteshi chako, ona zvigadzirwa kana mushandirapamwe wekutsvaga mari, shanyira chimwe chigadzirwa kudzidza zvakawanda, zvichingodaro.
Kuti ugadzire zvimwe zvikamu zvakasikwa zvechiitiko chekuona, YouTube ine yakatsiva zvirevo nema end skrini, uko kwaunogona kuratidza anowoneka anonakidza ekudana-ku-kuita makadhi mumasekondi makumi matatu ekupedzisira ezvako zvemukati.
Maitiro Ekuwedzera Ekupedzisira Screen
Vagadziri vako vaunofarira veYouTube vane chinovhara chinoshamisira chekuvhara icho chinokurudzira iwe kuti urambe uchiona mavhidhiyo avo? Semuenzaniso, heino imwe kubva Mugovera Manheru Rarama:
Iwe unogona kugadzira yakasarudzika yekupedzisira skrini, zvakare. Ivo vanobatsira kuchengeta vatariri pachiteshi chako nekupa zano mamwe mavhidhiyo uye saiti dzavanogona kuongorora. Heano maitiro ekuzviita:
Enda kune yako Vhidhiyo Maneja, tora "Hora," uye sarudza "End screen uye zvirevo" kubva pakudonhedza menyu:
Kubva ipapo, unoendeswa kuEkupedzisira skrini yemusiki studio, kwaunogona kutamba uchitenderera nematemplate akasiyana uye neshure kuti uone kuti unoda sei yako yekupedzisira skrini kuti ioneke. Wobva wadzvanya iyo "Wedzera chinhu" menyu kuti usarudze kwaunoda kutumira vaoni kubva kumagumo skrini.
Chero vagadziri veYouTube vanogona kuwedzera yekupedzisira skrini kuti vagadzirise yavo chiteshi. Heinoi anotsanangura chinyorwa uine rumwe ruzivo uye kukurudzira mazano.
Maitiro Ekuwedzera Kadhi
Unogona kushandisa makadhi kushambadzira zvigadzirwa zvinoshandiswa mumavhidhiyo ako kana zvinongedzo pane yako webhusaiti iwe yaunoda musika paYouTube. Kana vataridzi vakabata iyo "i" mukona yekumusoro-kurudyi kona yevhidhiyo, makadhi anowedzera, semuenzaniso pazasi:
Kuti uwedzere kadhi kuvhidhiyo yeYouTube, tungamira kune yako Vhidhiyo Maneja, tinya "Hora," uye sarudza "Makadhi" kubva pakudonhedza menyu.
Wobva wasarudza kuti muvhidhiyo yaunoda kuti makadhi aoneke kupi, uye tora pakaderera pasi menyu "Wedzera kadhi" kuti usarudze zvaunoda kuti kadhi racho riwedzere. Kubva ipapo, gadzirisa zvirimo zvinozoonekwa kune vanoona pavanotora "i" ivo vachiona vhidhiyo yako:
10.YouTube ine raibhurari hombe yemhando yepamusoro, yemubhadharo-isina maungira emimhanzi uye mumhanzi waunogona kutarisa nekutora.
Unoda kuwedzera mamwe anotonhorera mheremhere kana mimhanzi kune yako YouTube vhidhiyo (kana chero vhidhiyo)? YouTube iripo kwauri. Zvine raibhurari yose yemhando yepamusoro, 320kbps maodhi enzira uye maungira emhedzisiro iwe aunogona kurodha mitezo-yemahara uye wobva wawedzera kumavhidhiyo ako. (Kana teerera panguva yako yemahara. Hatizotonge.)
Kuwedzera mimhanzi kana kurira kune yako vhidhiyo: Vhura YouTube Raidhi Raibhurari nekudzvanya apa kana kuvhura yako Musiki Studio, nekudzvanya "Gadzira" mumenyu kuruboshwe-kuruboshwe, uye kusarudza "Audio Raibhurari."
Zvino, kunakidzwa kunotanga. Nokusingaperi, zvinokutangisa pane iyo "Mhedzisiro mhedzisiro" tebhu. Pano, unogona kutsvaga ruzha uchishandisa yekutsvaga bar, sezvandakaita mupikicha iripazasi yemidhudhudhu kurira.
Iwe unogona zvakare kushandura nechikamu (zvese kubva kumanzwi emunhu kusvika kumatambudziko emamiriro ekunze) kana kupururudza kuburikidza nevekunakidzwa iwe wawakaisa nyeredzi kare. Kuti uwane nyore kuwana mune ramangwana, sarudza nyeredzi kuti uwedzere iyo track kune ako aunofarira. Mabhawa ari padyo nenziyo anoratidza kudakadza kwakaita nzira.
Kana iwe ukachinjira kune iyo "Music" bhaa, iwe unogona kutarisa mukati mayo ese emadzishe emahara mimhanzi. Iwe hausi kuzowana maBeatles muno, asi iwe unowana zvimwe zvakanaka zvinhu - semumhanzi unonyumwira, mimhanzi inosimudzira, mimhanzi yezororo, jazi, nezvimwe. Panzvimbo pekuchinja nechikwata, unogona kuchinja nemhando, manzwiro, chiridzwa, nguva, zvichingodaro.
(Cherechedza: Mimwe yemafaira emimhanzi imomo anogona kunge iine zvekuwedzera zvinongedzo zvaunofanira kutevedzera, asi izvo zvakanyatso rongedzwa pane rwiyo-nenziyo-hwaro. Unogona kudzidza zvakawanda pa YeYouTube Rutsigiro peji pano.)
Paunenge iwe wawana rwiyo rwaunoda, tinya museve kurodha pasi uye rinobva ratodha pasi zvakananga kukombuta yako seMP3 faira. Ipapo, iwe unogona kuita chero chaunoda nacho.
Kana iwe uchida kutsikisa ruzha rwemavhidhiyo ako kunze kweYouTube, iwe uchafanirwa kuve nechokwadi kuti iwe uri kuteedzera iyo yese mirau yekuitsvaga. Tarisa kune ino YouTube Tsigiro peji yemaitiro akanakisa ekutsvagisa odhiyo, uye uyu kuti adzidze YouTube marongero emimhanzi.
11. Wedzera zvigadziriso uye zvigadzirwa zvekugadzira neYouTube Enhancements.
YouTube yakadzima huwandu hwezvinhu zvayakaedza nazvo panguva imwechete - kusanganisira zvirevo uye asiri-anozivikanwa mukurumbira wemasiraidhi - asi chishandiso chekugadzirisa icho chinoramba chiri chinobatsira ndezvokuvandudza. Zvipfumbamwe mhedzisiro iwe yaunowanzo kuwana pane yechitatu-bato vhidhiyo yekugadzirisa software, iwe unogona ikozvino kutora mukana we natively kuburikidza YouTube
Auto-gadzira mwenje uye ruvara
Dzikamisa shaky kamera mafambiro
Nyorera slow motion
Nyorera nguva yapera
Chengetedza zvikamu zvevhidhiyo yako
Kugadzira zvinowedzera kune vhidhiyo iripo: Dzvanya mune yako Vhidhiyo maneja uye tsvaga vhidhiyo yaungade kugadzirisa. Sarudza icon inodonha padyo ne "Hora" kurudyi kwevhidhiyo, uye sarudza "Zvigadziriso."
Mifananidzo kuburikidza filmora
Kana iwe uchirongedza pakombuta, bhatani iri rinozovhura zvese zvishanu maturusi kurudyi kwevhidhiyo yako, kwaunogona kuwedzera zvigadziriso zvakasiyana, mafirita, uye kukanganisa kwemhedzisiro uye nekuona mavanoshandura chigadzirwa chekupedzisira munguva chaiyo.
Ziva kuti handizvo zvese zvinowedzerwa zviripo pane nhare mbozha. PaApple uye Android mafoni emafoni uye mapiritsi, iwe unogona chete kudzora, kuwedzera mimhanzi, uye kuisa mafirita. Verenga ichi chinyorwa kuti udzidze zvakawanda nezve YouTube zvinowedzera.
12. Ridza YouTube mavhidhiyo kumashure pane nhare mbozha.
Dzimwe nguva, yako yega mimhanzi yekutamba haizi kungocheka. Kana kuti pamwe iwe unoda kuteerera kune ako aunofarira maartist mashandiro pane mibairo show.
Chero nzira, kana iwe waedza kuteerera mimhanzi paYouTube kuburikidza nharembozha yako, unogona kunge wakacherekedza chinhu chimwe: Haugone kubuda kunze kweapp. Iwe unofanirwa kuchengeta YouTube yakavhurika, uye haugone kushandisa foni yako kune chero chimwe chinhu, kuti uterere kune chimwe chinhu paYouTube. Mhando yekushungurudza kana iwe uri kuyedza kuwanda pane yako yekuenda kumba, handiti?
Zvino, pane hacks kuitira kuti iwe ugone kuteerera kune YouTube zvemukati kumashure uchiri kushandisa nharembozha yako. Hezvino izvo zvaunoita:
Maitiro Ekutarisa YouTube Mavhidhiyo mune Inotangira: iOS
Vhura Safari pane yako nharembozha, uye enda kune vhidhiyo iwe yaunoda kutarisa pairi https://www.youtube.com. Kutanga kutamba vhidhiyo yaunoda kuteerera, wobva wadzvanya bhatani reKumba kuti uvhare kunze kweSafari. (Ndakasarudza Katy Perry.)
Wadaro, swipe kumusoro pane yako screen skrini kuratidza Action Center.
Wadaro, Rova zvakasimba kuruboshwe kuratidza rwechipiri skrini paAction Center yako. Rondedzero yevhidhiyo yawakasarudza paYouTube inofanirwa kuoneka, uye kubva ipapo, tinya chete Play kuti urambe uchimhanya.
Maitiro Ekutarisa YouTube Mavhidhiyo mune Akaseri: Android
Vhura Firefox kana Chrome pane yako nharembozha, uye enda kune vhidhiyo iwe yaunoda kutamba pairi https://www.youtube.com. Wobva wadzvanya iyo "Zvirongwa" menyu mune yekumusoro kurudyi kona (ma ellipses) uye sarudza "Kumbira Desktop Saiti."
Wobva watanga kuridza vhidhiyo paYouTube, uye tinya bhatani repamba kuti udzokere kuchikona chako chekumba. Izwi rinoramba richiridza kumashure sezvaunoshandisa mamwe maapp
13. Unogona kurarama hova mavhidhiyo kuYouTube.
Rarama kutenderera vhidhiyo yanga iri hurukuro hombe yekukurukurirana kwemakore mashoma apfuura. Inoonekwa kukura kukuru, kunyanya mumakore mashoma apfuura nekuuya kwePeriscope yeTwitter, Facebook Live, uye Instagram mavhidhiyo anorarama.
Kudzidza maitiro ekurarama paYouTube kwakanyanya kuomarara (uye kuvhiringidza) pane kutenderera kurarama uchishandisa mapuratifomu akafanana Pane YouTube nzira iri nyore yekutepfenyura, hapana bhatani "rinotanga"; pachinzvimbo, iwe unofanirwa kurodha pasi encoding software uye nekumisikidza kuti ushandise kutenderera kurarama zvachose. YouTube yakaratidza 13+ encoders izvo zviri Live Verified.
Kana iwe uri kutenderera chiitiko chiripo, zvakadaro, zvese zvaunoda ndeye webcam. Tichasvika kwazviri pasekondi.
Rarama Rukova Kubva Kune Yako Desktop Komputa
Pinda muYouTube uye tinya bhatani re "Pakira" kumusoro-kurudyi kwescreen yako. Kazhinji, apa ndipo paunogona kurodha vhidhiyo yaivepo - asi pachinzvimbo, iwe uchazoda kutsvaga iyo "Live Streaming" module kurudyi-ruoko kurudyi rwechidzitiro chako. Dzvanya "Kutanga" mune iyo module.
Usati waenda kurarama, YouTube inotanga kusimbisa izvozvo chiteshi chako chakasimbiswa uye kuti hauna rarama rukova zvirambidzo mumazuva makumi mapfumbamwe apfuura. Kana zvese zvagadziriswa, une sarudzo mbiri dzekushambadzira: "Stream now" uye "Live Zviitiko."
Stream Zvino ndiyo yakapusa, inokurumidza sarudzo yekumhanyisa kuraramisa, ndosaka iri YouTube yekumisikidza kuraramisa. Iwe uchaona yakanakisa dashibhodhi senge iri pazasi paunosarudza "Live Kutenderera" kuruboshwe-ruoko Musiki Studio menyu:
Zvekare, iwe unozoona kuti hapana "kutanga" bhatani padhibhodhi. Apa ndipo pauchazoda kuvhura encoder yako uye wotanga nekumisa kutenderera kwako kubva ipapo. Heino YouTube Yepamoyo Kutenderera FAQ peji kune rumwe ruzivo rwakadzama.
Rarama Zviitiko zvinokupa iwe yakawanda kutonga pamusoro penzvimbo inoyerera. Unogona kuitarisa isati yaenda kurarama, inokupa backup redundancy hova, uye unogona kutanga nekumisa rukova paunoda.
Sarudza "Zviitiko Zvimhenyu" kubva kune yako dhivhodhi kudhizaina kana iwe waigonesa. Izvi ndizvo zvinoita dashibhodhi rezviitiko, uye unogona dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Paunomira kutenderera, isu tinobva tangoisa ipapo dura renzvimbo yako yekuyerera kune yako chiteshi. Ziva kuti ako akazadziswa ehupenyu erwizi mavhidhiyo anoitwa otomatiki paruzhinji pane yako chiteshi nekukasira uchangopedza kurekodha. Kuita kuti zvinyangarike kubva paziso reruzhinji kana iwe uchinge wapedza, unogona kusarudza "Gadzira dura rekuchengetedza pakavanzika" mu "Stream Sarudzo" chikamu chewako dashibhodhi.
Rarama Rukova Kubva kune Yako Nhare Yekushandisa
YouTube ine zvakare akadzungirirwa kunze kutenderera hupenyu kubva kune nharembozha yevagadziri veYouTube vane zviuru gumi kana vanopfuura vanyoreri (kubvira musi wekutumira uku - izvo zvichawanikwa kune vagadziri vese munguva pfupi, sekureva kweblog blog).
Kurarama kutenderera kunonzwisisika kubva kune nharembozha pane pane desktop desktop. Vagadziri vanokodzera vanogona kungovhura yavo YouTube app pane nhare, tinya kamera kamera kumusoro kwechiso, uye sarudza "Go Live."
Kubva ipapo, vagadziri vanogona kuisa ruzivo nezve nhepfenyuro vasati varekodha zviripo kune vanyori vavo, sezvakaratidzwa pasi apa:
Kuti uwane yakawanda kurairirwa kwekuenda kunorarama kuYouTube pane zvishandiso, YouTube yakaburitsa a Rubatsiro chinyorwa pano. Unoda kuona kuti ndeapi mavhidhiyo ari kurarama vamwe vari kutora paYouTube? Unogona bhurawuza akakurumbira YouTube mavhidhiyo ari kurarama izvozvi nekudzvanya pano.
14. Unogona kukanda nekuona 360-degree mavhidhiyo (kurarama uye pre-rekodhi) - uye muVR.
YouTube yakatanga kuzivisa rutsigiro rwayo rwema360-degree mavhidhiyo kumashure munaKurume 2015, uye chaive chitsva chizere - tisingataure chinochinja-mutambo. Kubva ipapo, mabhureki, vatambi, uye vamwe vashandisi vakagadzira zvimwe zvinotyisa zve360-degree zvemukati, senge vhidhiyo iyi kubva kuSamsung:
Sezvauri kuona, iyo ruzivo semuoni ndeyechokwadi, inotonhorera chaizvo. Pa desktop, unogona kubaya-tarisa kutenderedza vhidhiyo kuti uone maakona akasiyana siyana vhidhiyo ichiridza. Pafoni, zvinotonhorera: Unogona kufambisa kamera yako kutenderedza kuti uchinje kona. Unogona bhurawuza ari kutenderera 360-degree uye VR mavhidhiyo pano.
Maitiro Ekugadzira iyo 360-degree Vhidhiyo paYouTube
Kune izvi, iwe uchazoda chakakomba michina. Makamera ane 360-degree kugona anowirirana neYouTube akanyorwa pano pane peji reYouTube Rutsigiro, pamwe nemaitiro ekugadzira uye kurodha 360-degree vhidhiyo faira.
Ko zvakadii kurarama vhidhiyo mumadhigirii makumi matatu nemakumi matatu? Chiziviso ichocho chaizouya gore mushure mekutanga, muna April 2016 - iro svondo rimwe chetero Facebook yakazivisa dhizaini yayo ye360-degree kamera. Neraki kune vanhu veYouTube, yakarova Facebook nekutsigira ese ari maviri vhidhiyo uye 360-degree tsoka zvese kamwechete.
Maitiro Ekutarisa Chero YouTube Vhidhiyo muVR
Iyo Verge inodaidzwa mazana matatu nemakumi matatu neshanu mavhidhiyo-akapararira "Iro gedhi zvinodhaka kune chaicho chokwadi" cheYouTube. Zvimwe kunze kwewebsite yeYouTube kana app, haudi chero chinoshamisira michina kuti ugone kuona 360-degree mhenyu vhidhiyo uye unzwe kunge uriko chaizvo.
Izvo hazvireve kuti headset haisi sarudzo - uye inotyisa pane izvozvo, nekuti YouTube yakaburitsa yayo Kadhibhodi ficha. Kadhibhodhi inowanikwa pa chero vhidhiyo yeYouTube iwe unotarisa kana kurodha, uye unoshanda ne Google kabhodhi (chaiyo VR headset neGoogle) uye mamwe mahedhiyo eVR anowanikwa nhasi.
Kushandisa Kadhibhodhi uchitarisa vhidhiyo yeYouTube kuburikidza nharembozha: Sarudza chero vhidhiyo mune yako YouTube mbozhanhare app, wobva wadzvanya madota matatu mukona yekumusoro-kurudyi kona yevhidhiyo. Mukudonha-pasi, sarudza "Wona muKadhibhodhi." Iwe unogona kunge uchitoona sarudzo iyi ichioneka muzasi-kurudyi kwe360-degree mavhidhiyo.
Izvi zvinokukurudzira kuti ubatanidze nharembozha yako kuVR inoenderana. Paunenge iwe uchinge waita, gadzirira iyo stellar chiitiko, uye chimbofungidzira kuti izvi zvinogona kurevei kune zvemukati zvaunogara nazvo wega YouTube chiteshi.
15. YouTube shambadzo inotarisa kwauri zvichibva pane algorithm yakafanana neGoogle neFacebook.
Iyo YouTube algorithm inosarudza sei kuti ndeapi ma ads anotamba pane mavhidhiyo aunoona?
Inotendeuka inoshanda zvakanyanya sezvinoita Google neFacebook ads. Kufanana nedzimwe nzvimbo dzesununguko, vanoshambadzira vanobatsira kubhadhara ruzivo rweYouTube mukudzoka kwekuratidzwa kushambadziro. Uchadaro ona mamwe ma ads pamusoro pevamwe nekuda kwemapoka ako ehuwandu hwevanhu, zvaunofarira (zvinotongwa muchidimbu nezvaunotsvaga Google neYouTube) uye izvo zvemukati zvawakatarisa kare, kusanganisira kana iwe kana kuti iwe wakambosangana nevashambadzi mavhidhiyo, kushambadzira, kana YouTube chiteshi.
MaYouTube algorithms zvakare edza kuona kuti vanhu havasi kuzadzwa nezviziviso vachiona mavhidhiyo - saka dzimwe nguva hazvizoratidze kushambadzira pamavhidhiyo anoita mari, kunyangwe paine mutambo wevanhu.
Heano mafomati mashanu eshambadziro aunotarisira kuona paYouTube, uye mashandiro awo.
A. Ratidza kushambadza, iyo inoratidza kumusoro kweiyo vhidhiyo uye inongowanikwa chete pane desktop uye laptop makomputa. Mushambadzi anobhadharwa paunoona kana kubaya pamushambadziro, zvichienderana nesarudzo yavo.
Image Via YouTube's Musiki Chikoro
B. Kushambadzira kushambadzira, iyo inowoneka pazasi pe20% yeiyo vhidhiyo hwindo uye parizvino inongowanikwa chete pane desktop uye laptop makomputa. Iwe unogona X kunze kwekushambadzira chero nguva.
C. TrueView mune-kuyerera, inodonhedzwa vhidhiyo kushambadzira, ayo anowanzo shambadziro. Idzi ndidzo dzaunogona kutsika mushure mekuona kwemasekonzi mashanu. Vashambadziri vanogona kuiisa pamberi, panguva (yikes!), Kana mushure mekunge vhidhiyo yatamba, uye ivo vanobhadharwa chete kana iwe ukatarisa kanokwana 30 masekondi eiyo clip kana kusvika kumagumo evhidhiyo kushambadzira - chero chinouya kutanga.
D. Asingasvetuke mavhidhiyo kushambadzira.
E. Midroll kushambadza, ayo ari ma ads anowanikwa chete kumavhidhiyo anopfuura maminetsi gumi nemashanu akareba mukati mevhidhiyo kunge kushambadzira kweTV. Iwe unofanirwa kutarisa kushambadza usati waenderera kuburikidza nevhidhiyo. Maitirwo anobhadharwa nemushambadzi zvinoenderana nerudzi rwekushambadzira: Kana iyo midroll iri yeViewView kushambadza, iwe unofanirwa kutarisa masekondi makumi matatu ekupedzisira kana kushambadza kwese - chero ipfupi. Kana iri kushambadzira kweCPM, unofanirwa kutarisa kushambadza kwese zvisinei kuti yakareba sei.
Chikwereti chemufananidzo: YouTube's Musiki Chikoro
F. Bumper ads. Bumper shambadziro yakagadziridzwa kune nharembozha uye inofanirwa kutariswa mune avo vese vatariri vasati vaenderere mberi kune vhidhiyo yavanoda kuona.
16. Unogona kubvisa kushambadza kubva kuYouTube mavhidhiyo (uye tarisa mavhidhiyo isingaenderane) kwe10 madhora pamwedzi.
Vhidhiyo kushambadzira ndicho chikonzero iwe unogona kutarisa mavhidhiyo emahara paYouTube. Icho chokwadi vazhinji vedu takatambira. Asi nebasa rekubhadhara reYouTube YouTube Red, izvo hazvireve hazvo kuti zvinofanirwa kuve zvechokwadi zvakare.
Kwe $ 9.99 pamwedzi, unogona kutarisa YouTube mavhidhiyo… pasina kushambadzira. Uye, pamusoro pemavhidhiyo asingashambadzwe, unogona kusevha mavhidhiyo pane yako nharembozha uye woatarisa kumashure uye / kana isingaenderane, uye unogona kushandisa YouTube's Music App (pa iOS uye Android) kumashure, isipo, uye / kana paodhiyo modhi. Ichi hachisi chibhorani.
Iwe unofunga kuti kukwezva kwemavhidhiyo-asina mavhidhiyo kwaizokonzeresa mhirizhonga kubva payakatangwa mukupera kwa2015, kunyanya kupihwa hutongi hweYouTube munzvimbo yemumhanzi. Zvinotoshamisa kuti handina kumbonzwa ruzha nezvazvo. Asi YouTube haina kuburitsa nhamba dzevanonyoresa (sevhisi inonzi ine kumativi 1.5 mamirioni) saka zvakaoma kutaura kuti zviri kuita sei. Chero nzira, zvakanaka kuti uzive nezve - kunyanya kana iwe uchida kuunganidza nziyo nemimhanzi mavhidhiyo seni zvandinoita, asi haufarire pavanoputswa nezviziviso.
17. Unogona kushandisa Google Maitiro kuongorora uye kuenzanisa akakurumbira YouTube ekutsvaga mazwi nekufamba kwenguva.
Iwe unogona kunge watoshandisa Google Trends kutarisa mukurumbira wemamwe mazwi ekutsvaga nekufamba kwenguva. (Inogona kuve chishandiso chakakura chekushambadzira pakuita sarudzo dzakapinza dzemazwi, semuenzaniso.) Asi waiziva here kuti unogona kuishandisa kuenzanisa mukurumbira wemibvunzo yekutsvaga yeYouTube, kunyanya?
Zvese iwe zvunofanirwa kuita vhura Google Trends uye nyora izwi rekutsvaga mu "Ongorora misoro" yekutsvaga bar kumusoro. Kana peji iro rango vhura, tinya pa "Tsvaga paWebhu" kuvhura inodonhedza menyu, uye sarudza "YouTube Kutsvaga" saka inosvina nekutsvaga kweYouTube zvakanyanya.
Unogona kuona kuti, kune mamwe mazwi ekutsvaga, maitiro ekutsvaga akasiyana zvakanyanya paGoogle (pamusoro) pane paYouTube (pazasi).
18. Pane 'yakachengeteka' vhezheni yeYouTube inowanikwa yevana vako.
Chero mubereki anokuudza iwe kuti zvinotyisa sei kuvana vavo kuzviita vanokwanisa kuwana kune zvese zveruzhinji pa internet. Asi kune vako vadiki vana, pane nzira dzekudzora iko kuwana uye kuve neakawanda kutonga kwezvavanotarisa nekuwana - kusanganisira yevana vhezheni yeYouTube inonzi YouTube Kids.
Ivo vanhu veYouTube vanoshevedza YouTube Vana "vhezheni yakachengeteka yeYouTube." Haisi raibhurari yakavhurika-yakavhurika yemavhidhiyo epamhepo senge YouTube iri; pachinzvimbo, inoshandisa mafirita anofambiswa nema algorithms kusarudza mavhidhiyo kubva kuYouTube ayo akachengeteka kuti vana vaone. Izvo zvakare yemahara, nekuda kushambadziro (ayo anotariswa zvakanyatsonaka sezvinobvira).
Unogona kudzima kana kudzima chinhu chekutsvaga, zvinoenderana nekuti unotonhorera here nevana vako vachitsvaga mavhidhiyo pachavo - kana kana uchida kuvaganhurira kune imwe seti yemavhidhiyo akasarudzwa neapp, pamwe neayo Anwendung inokurudzira zvichibva pane zvavakatarisa kare. Iwe unogona kuseta timer yekumisikidza iyo inguva yakawanda iyo mwana anoshandisa pane iyo app, inova mimhanzi kune vazhinji vabereki nzeve.
Iyo algorithm yakagara zvakanaka - yeuka, Google ikambani yemubereki weYouTube - asi, sekunyevera kwayinoita mumubvunzo wevabereki, "Hapana algorithm yakakwana."
19. Iwe unogona ikozvino kujekesa yako YouTube Nhoroondo.
Iwe ungazopedzisira wave kuda kudzima zvinhu kubva yako YouTube yekutsvaga kana yekuona nhoroondo. YouTube inokutendera kuti ujekese nhoroondo yako, imbomira nhoroondo yako kuti imire kurekodha zvaunotsvaga nekutarisa kubva ipapo kuenda kumberi, kana kupfuura nhoroondo yako uye kudzima mamwe mavhidhiyo.
Kuchenesa nhoroondo yako pane desktop yako kana nhare mbozha: Enda kune iyo "Yekuona Nhoroondo" menyu. Apa ndipo painogara pane yako desktop desktop browser uye mune yako mobile app, zvichiteerana:
Kubva ipapo, unogona "kujekesa nhoroondo yese yekutarisa" (bvisa zvachose zvinyorwa zvese zvawakatarisa), "imbomira kuona nhoroondo" (rega kurekodha mavhidhiyo aunotarisa uchienda kumberi), kana wega bvisa mavhidhiyo kubva munhoroondo yako nekukwira X kana ellipses padhuze nemavhidhiyo. Hezvino izvo zvinoita senge pane desktop uye pane nhare, pazasi:
YouTube yakaburitsa a Rubatsiro chinyorwa kana iwe uchida yakawanda kurairirwa kwekubvisa zvinhu kubva pane yako YouTube yekuona nhoroondo, futi.
20. Unogona kudzidza nezveYouTube yekopirimi mazwi kubva kukanda yemapipi asina musoro.
Kuzviita kusvika pano? Heano mubairo mudiki: YouTube's "Copyrights Basics" FAQ peji, inova, inokodzera vhidhiyo yeYouTube - uye inoratidzira yakanaka yakajeka mavara evatambi. Izvo chaizvo zvinodzidzisa, uye zvinoita sekunge vhidhiyo timu yeYouTube yaive nekunakidzwa kukuru kuzviita.
Mutsetse wangu wandinoda pamwe, "Unoziva pane zvinongedzo pane ino peji rewebhu, handiti? Haufanire kuona izvi. ” Kunyangwe kwaya yekorira yemaputi yakanga yakanaka kwazvo, futi.
Tinovimba tavhura maziso ako kune mamwe anotyisa YouTube hacks, matipi, uye maficha kunze uko iwe aungave iwe usina kuziva nezvazvo. Iye zvino pinda paYouTube uye uite zvimwe uchizviongorora. Iyo chikuva zvirokwazvo haisi kuenda chero kupi.
Maitiro Ekuita Spotify Collaborative Playlist
Yakanyanya Kunakidzwa Vhidhiyo Kurongedza Mapurogiramu Eko Instagram 2020